बिहेकै दिन बेहुलीले ब’च्चा जन्माइन् त्योपनि हाम्रै नेपालमै ! – Onlines Time
January 21, 2021 January 21, 2021 onlinestimeLeaveaComment on बिहेकै दिन बेहुलीले ब’च्चा जन्माइन् त्योपनि हाम्रै नेपालमै !
सिरहाको सुखिपुर नगरपालिका ४पोखरीया गाउँमा विवाह भएकै दिन बेहुलीले छोराजन्माएकी छन्। राज कुमार मोचीको छोरा उमेश कुमार रामले सिरहाको तेनुवापटी शिवनगर बस्ने बलिराम मोचीको छोरीसँग विवाह गरेका थिए ।
घरमा भित्राउने समयमा बेहुलीले बच्चालाई जन्मदिएकी हुन्।लगतै बेहुलाका परिवारजनले बेहुलीलाई माइत पठाएका छन्।बच्चा स्वथ्य रहेको स्थानिय बासीराम सिंहले दिए ।
सिरहाको सुखिपुर नगरपालिका ४ पोखरीया गाउँमा विवाह भएकै दिन बेहुलीले छोरा जन्माएकी छन् । राज कुमार मोचीको छोरा उमेशकुमार रामले सिरहाको तेनुवापटी शिवनगर बस्ने बलिराम मोचीको छोरीसँग विवाह गरेका थिए ।घरमा भित्राउने समयमा बेहुलीले बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । लगतै बेहुलाका परिवारजनले बेहुलीलाई माइत पठाएका छन् । बच्चा स्वथ्य रहेको स्थानिय बासीराम सिंहले दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गोरखा शाखामा सुन धितो राखेर कर्जा लिन गएका १० जना सोमबार बिहान भित्र पस्नै नपाई फर्किए । अनेक बिन्तीभाउ गर्दा उनीहरूलाई सुरक्षागार्डले भने, ‘क्यासियर सापले कसैलाई भित्र नपठाऊ भन्नुभएको छ । तपाईंहरू भित्र गए मैले गाली खान्छु ।’
धेरै चिन्ता गर्नेलाई उनी थप जवाफ दिइरहेका थिए, ‘क्यासियर सापको सरुवापत्र आएको छ । त्यसैले उहाँले काम गर्न छाड्नुभयो । अब पछि आउनू ।’
क्यासियर विराटकिशोर श्रेष्ठले माघ १ गतेदेखि काम गर्न छाडेका बैंकले जनाएको छ । ‘बरबुझारथको प्रक्रिया चलिरहेकाले अहिले कर्जा प्रवाह रोकिएको हो’, शाखा प्रबन्धक कपिल कार्कीले भने ।
त्यसो त सोमबार मात्र होइन, सुन धितो राखेर कर्जा लिन जानुभयो र तपाईं लाइनको ११ औं नम्बरमा पर्नुभयो भने अरू बेला पनि गार्डले रोक्छ । जति बिन्तीभाउ गर्नुस्, गार्डको एउटै जवाफ हुन्छ, ‘क्यासियर सापले १० जनाभन्दा एक जना पनि भित्र नपठा भन्नुभएको छ ।’ पठाए आफूलाई कराउने उनले बताए ।
क्यासियर श्रेष्ठको आदेशअनुसार १० जनाले मात्र प्रवेश पाउँदा टाढा–टाढाबाट आएका सेवाग्राही बाहिरको बाहिरै पर्ने गरेका छन् । ‘नजिकैबाट आएकालाई त फेरि भोलिपल्ट पनि आउँदा केही फरक नपर्ला । तर, टाढाबाट आउनेहरू त्यति कामका लागि होटलका बस्नुपर्ने हुन्छ’, दिनहूँ उनीहरूको समस्या देखिरहेका स्थानीय आत्माराम श्रेष्ठले भने, ‘चिनेजानेकाहरूले चाहिँ टेलिफोन गरेर सोर्सफोर्स लगाएर जसरी पनि काम पट्याउँछन् । टाढाबाट आउने सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् ।’ साधारण कामका लागि क्यासियर श्रेष्ठका कारण आफूले बारम्बार सास्ती पाएको उनले बताए ।
शाखा प्रबन्धक कार्कीले भने कोटा प्रणाली नलगाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बिहान ७ देखि पौने ९ बजेसम्म आउनेको काम गर्ने गरेका छौं’, कार्कीले भने, ‘दिउँसो नभ्याउने भएर सुन कर्जाको काम बिहान गर्ने गरिएको हो । बिहान १० जनाभन्दा धेरै भ्याउँदा पनि भ्याइँदैन ।’
बैंकले सेवाग्राहीको कोटा तोक्न नपाइने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रमोद अधिकारीले बताए । ‘सकेसम्म सेवा दिने हो, बैंकले सेवाग्राहीको कोटा तोक्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यहाँ के भएको रहेछ, म कुरा गर्छु ।’
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोटामा काम गर्दा सेवाग्राहीलाई परेको असरबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशन भएको थियो । त्यसलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोटा प्रणाली सच्याएर कार्यालय समयमा सकेजति काम गर्न सुरु गरेका थिए ।
January 4, 2021 January 4, 2021 onlinestime
अत्यान्तै दु’खद खबर: मिक्स्चर मेसिनमा बेरिएर युवकको मृ*त्यु । यस्तो कसैलाई नहाेस्
हसाउन नसके पनि सगै रुन्छु भन्दै यसरी भए भगवान जस्ता श्रिमान बिनोद भावुक (हेर्नुस् भिडियो)